एनसेलको लाभकरबारे अहिले ठूलो बहसको विषय भएको छ, यसको छिनोफानो कहिलेसम्म हुन्छ एउटा टाइमलाइन दिनुहुन्छ कि ? पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ । पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तथा हाम्रो प्रचलनअनुसार पनि बिक्रेताबाट लिनुपर्ने हो । तर, बिक्रेताबाट किन लिइएन प्रश्न यहाँ छ । मैले गम्भीर ढंगले हेर्न खोजेको । त्यतिखेर पुँजीगत लाभकर लिएर बिक्रेतालाई छोड्नुपर्ने अवस्थामा किन त्यत्तिकै छाडेको छ, त्यसमा सबैको ध्यान गएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले कर पाउनैपर्छ, कर उठाउनैपर्छ । तर, हिजो बिक्रेताबाट लिनुपर्ने लाभकर किन लिन छोड्यो र त्यत्तिकै जान दिइयो ? मैले यो विषय अस्तिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उठाएको थिएँ ।